हरियो बाकसमा होहल्ला - व्यंग्य - प्रकाशितः फाल्गुन १५, २०७३ - नेपाल
हरियो बाकसमा होहल्ला
- सुर्जे नेवा:
हिजोआज समाचारको खडेरी परेर हो कि कुन्नि ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हेलिकप्टर चढेर पुराण उद्घाटन गर्न गए भन्ने समाचार आयो । अरे यार ! कुनै पनि चीज चढ्न काठी र लगाम चाहिन्छ नै । त्यो हेलिकप्टरमा न लगाम थियो, न काठी । उनी त केवल गुड्नका लागि चक्कासमेत नभएको हरियो बाकसभित्र छिरेर बसेका मात्र थिए । अब त्यो बाकस उडेर पुराण उद्घाटन गर्ने ठाउँमा पुग्यो त उनको के दोष ?
होसियार है साथीहरु ! उता अमेरिकामा यस्तै कुराले रिसाएर त्यहाँका पत्रकारलाई बेलाबेला राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्रम्पेटजस्तै बजाइदिने गरेका छन् । यस्तै पारा हो भने यहाँ पनि रिसाएका बेला हाम्रा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पच्काइदेलान् नि फेरि !